एन्कर साउन्डकोर फ्लेर +, तपाईंको संगीतको लागि प्रकाश र शक्ति आईफोन समाचार
एन्कर साउन्डकोर फ्लेर +, तपाईंको संगीतको लागि प्रकाश र शक्ति
तपाईंको संगीतको मजा लिनु आज भन्दा सजिलो छ। हामीसँग हाम्रो फोनहरूमा संगीत छ, ट्याबलेटमा पनि, हाम्रो हेराइहरूमा पनि, स्पिकरहरू आफैंमा संगीत छ जुन यो प्रदान गर्न अर्को उपकरणको आवश्यकता बिना नै छ। तर एक साधारण स्पिकर जसले हामीलाई एकदम उचित मूल्यमा राम्रो आवाज प्रदान गर्दछ सधैं राम्रो समाचार हो.
यो वास्तवमै यस सौंकोर फ्लेयरको भूमिका हो + अन्कर, सहयोगीविना वक्ता, पोर्टेबल बिन्दुमा कि हामी यसलाई हामी आफैं लिन सक्दछौं जहाँ राम्रो स्वायत्तताका साथ र यसले हामीलाई पार्टी र पानी प्रतिरोध गर्न बाँच्नको लागि राम्रो बासको साथ प्रकाशको साथ एक शक्तिशाली ध्वनि प्रदान गर्दछ। हामीले यो परीक्षण गरेका छौं र हामी तपाईंलाई हाम्रा प्रभावहरू बताउँछौं।
1 आश्चर्यको साथ सोबर डिजाइन
2 राम्रो बासको साथ शक्तिशाली आवाज
आश्चर्यको साथ सोबर डिजाइन
लाउडस्पीकरको डिजाईन एकदम परम्परागत छ, यद्यपि यसमा "फ्लेर्ड" प्रोफाइल छ जसले यसलाई केही अधिक मूल र सबै भन्दा माथि स्थिर बनाउँछ, किनकि यसको फराकिलो र भारी आधार छ। कपडा सामग्रीले ढाकिएको, र रबरको माथिल्लो र तल्लो भागको साथ, पहिलो वक्ताले आँखा समात्ने वक्ता होइन, तर यो एक निर्मित आश्चर्य छ कि एक भन्दा बढि खुशी गर्न सक्नुहुन्छ।
आधारमा एलईडी बत्तीहरू छन् जुन तपाईं स्पिकरबाट संगीतको तालमा परिवर्तन गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, वा निश्चित ढाँचा अनुसरण गर्न। ती दुबै आईओएस (हरूको लागि उपलब्ध ध्वनीकोर अनुप्रयोगसँग पूर्ण अनुकूलन योग्य छन्।लिङ्क) र एन्ड्रोइड (लिङ्क). अनुकूलन विकल्पहरू धेरै छन्, र तपाईं अधिक आरामदायी प्रकाशबाट सबै डिस्कोमा पाउन सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि, यदि तपाइँ कुनै प्रकारको प्रकाश चाहनुहुन्न भने, तपाइँ तिनीहरूलाई बन्द गर्न सक्नुहुन्छ।
यसमा शीर्षमा नियन्त्रण बटनहरू छन् (प्लेब्याक नियन्त्रण, प्रकाश नियन्त्रण र बास बढाउन बासअप मोड), यसलाई सार्नको लागि ह्याण्डल वा तपाईंको ब्याकप्याकमा हुक गर्नुहोस्, र सिलिकॉन ढक्कन मुनि। माइक्रोयूएसबी (रिचार्जिंग), यूएसबी (तपाईंको स्मार्टफोन रिचार्ज गर्न) र ज्याक इनपुट जडानहरू। तपाईको आईफोन वा अन्य कुनै पनि स्मार्टफोन रिचार्ज गर्न सक्षम हुनु अत्यन्तै स्वागतयोग्य कुरा हो, ताकि संगीत रोक्न नपाओस् किनकि तपाईको फोन सकिसकेको छ। यी कनेक्टरहरूमा ब्लुटुथ र पावर बटन मार्फत यसलाई लिंक गर्न बटन।
सिलिकॉन क्याप यी कनेक्टरहरूको रक्षा गर्न धेरै सुविधाजनक छ, यदि हामीले यसलाई ध्यान दियौं भने महत्त्वपूर्ण छ यो वाटरप्रूफ स्पिकर (IPX7) हो त्यसैले डर बिना तपाईं यसलाई पूलमा लैजान सक्नुहुनेछ बर्षको पार्टी माउन्ट गर्न। यसको आकार र स्वायत्ततालाई ध्यानमा राख्दै (पूर्ण चार्जमा २० घण्टा प्लेब्याक), यसलाई कहिँ पनि तपाइँसँग लैजानका लागि पर्याप्त हल्का स्पिकर (20० ग्राम) हो।
राम्रो बासको साथ शक्तिशाली आवाज
यो आकारको स्पिकरका लागि ध्वनि प्रभावशाली छ। यसको वास्तवमै धेरै नै भोल्यूम छ, यद्यपि तपाईले भोल्यूम धेरै बढाउनुभयो भने तपाईंले पहिले नै केही सानो विकृति देख्नुहुनेछ। अर्को चीज जुन यस सेक्सनमा बाहिर खडा छ, बास, धेरै स्ट्राइकि।। लाउडस्पीकरको निर्माणको अर्थ भनेको ध्वनि लगभग ºº०º मा वितरित गरियो, त्यसैले ध्वनि धेरै प्रभावित हुँदैन यदि तपाईं ठीक अगाडि वा पक्षमा हुनुहुन्छ भने, जुन यसलाई घर बाहिर राख्न महत्त्वपूर्ण छ।
एउटा तर यो स्पिकरमा राख्न सकिन्छ यो हो कि जब तपाई बासअप मोड प्रयोग गर्नुहुन्छ बास लाई बाहिर निकाल्नको लागि, मिडहरू केहि गोप्य हुन्छन्। यो मोडलाई अक्षम बनाएर आंशिक रूपमा समाधान हुन्छ। सामान्य रूपमा आवाज एकदम राम्रो छ, विशेष गरी जब तपाईं यसको आकार र मूल्यलाई विचार गर्नुहुन्छ।। यदि हामी यसलाई युई बूम २ सँग तुलना गरौं, यसको समान मूल्य दायरामा, म भन्न सक्दछु कि यस फ्लेर + द्वारा प्रस्ताव गरिएको ध्वनि केहि उच्च छ।
एउटा स्मार्ट स्पिकरले बाढी पुर्‍याउने संसारमा, त्यहाँ अझै पारम्परिक स्पिकरहरूको लागि ठाउँ छ जुन प्रतिस्पर्धी मूल्यहरूमा राम्रो ध्वनि गुणस्तर प्रदान गर्दछ, जुन अन्तमा स्पीकरहरूको लागि आउँदा वास्तवमा तल झर्दछ। एन्कर साउन्डकोर फ्लेर + यसको आकारको लागि आश्चर्यजनक शक्तिको साथ बाहिर खडा हुन्छ, पर्याप्त प्रासंगिक बास र राम्रो पोर्टेबिलिटीको साथ राम्रो स्वायत्तता। पानी प्रति यसको प्रतिरोध पनि यसको पक्षमा एक बिन्दु हो, साथ साथै निजीकृत एलईडी प्रकाश। यी सबैको लागि हो यसको मूल्य दायरामा सबैभन्दा सिफारिश गरिएको ब्लुटुथ स्पिकरहरूमध्ये एक: 109 १०। अमेजनमा (लिङ्क)। तपाईं यसलाई भौतिक स्टोरहरूमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ जस्तै वर्टेन, मिडिया मार्कट र ओरेन्ज।
साउन्डकोर फ्लेर +
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » एन्कर साउन्डकोर फ्लेर +, तपाईंको संगीतको लागि प्रकाश र शक्ति
एक आईफोन १२ प्रो अधिकतम अवधारणाको भिडियो
दैनिक - G जी, वर्तमान वा भविष्य?